मनोविद् - साप्ताहिक
करुणा कुँवर, मनोविद्माघ २६, २०७४
बाह्य सम्बन्ध कायम गरेर दाम्पत्य जीवनभित्र सन्तुष्टिको खोजी गर्नु जुवा खेल्नु समान हो । यसमा कुन उत्तम विकल्प हो भनेर सोच्नुपर्छ र त्यसभित्र सम्भावना र सन्तुष्टिको खोजी गरिनुपर्छ । धेरैले दाम्पत्य जीवनभित्रको यौन सम्बन्धलाई राम्रो मानेर यस्तो सम्बन्धलाई रोचक र रमाइलो बनाउने गरेका छन ।
सेक्स साइट हेर्नु घातक
करूणा कुँवर, मनोविद्फाल्गुन १८, २०७३
अहिले संसारको एउटा कुनामा भएका यौनजन्य क्रियाकलापका तौरतरिका अर्को कुनामा द्रुत गतिमा विस्तार भएका छन् । यसलाई समय, काल, परिस्थितिअनुसार स्वाभाविक मान्न सकिन्छ ।
उमेरको भिन्नताकै कारणले यौनेच्छा नभएको महसुस हुन्छ
करूणा कुँवर, मनोविद्माघ १९, २०७३
तपाईंले अप्ठ्यारो परिस्थिति भनेर संकेत गर्न खोज्नुभएको कुरा के हो ? यी मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित विषय हुन् र यिनको हल पनि त्यसरी नै खोज्नुपर्ने हुन्छ ।
करूणा कुँवर, मनोविद्पुस १६, २०७२
म ७२ वर्ष पुगिसकें । मेरी श्रीमती ६८ वर्षकी छिन् । मैले सुनेअनुसार उमेर ढल्कँदै जाने क्रममा यौनइच्छा पनि कम हुन्छ तर अहिले पनि मेरो यौनइच्छा पहिलेको जस्तै छ, तर श्रीमती बुढेसकालमा यौनसम्पर्क राख्न उचित नहुने बताउँछिन् । उनलाई ममा अझै यौनइच्छा भएको देख्दा आश्चर्य लाग्छ ।
शारीरिक रूपमा सन्तुष्ट छैन
करूणा कुँवर, मनोविद्भाद्र २१, २०७२
म ३९ वर्षीया महिला हुँ । मेरा श्रीमान् ६० वर्षको हुनुहुन्छ र म उहाँकी तेस्री श्रीमती हुँ । हाल आएर म श्रीमान्सँग शारीरिक रूपमा सन्तुष्ट छैन भने सम्बन्ध राख्न पनि इच्छा नभएको अनुभव हुन्छ । यसै कारणले होला, मेरो उमेर मिल्ने एक जना पुरुषसँग यौनसम्बन्ध हुँदै आएको छ ।
यो समस्याको कुनै समाधान छ कि ?
करूणा कुँवर, मनोविद्असार ४, २०७२
यौनरोग धेरैजसो पुरुषबाट महिलामा संक्रमित भए पनि महिलाहरू नै यस्ता रोगबाट बढी प्रताडित हुने गरेका छन ।